गुगल - सिर्जना र तपाईंको काम अनलाइन साझा क्रिएटिव अनलाइन
गुगल - सिर्जना र तपाईंको काम अनलाइन साझा
नयाँ! प्रस्तुतीकरणहरूमा सहयोग गर्नुहोस्
ईमेल प्रतिक्रिया एकत्रित गर्न को दिन समाप्त भएको छ।
सिर्जना गर्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् र छिटो अपलोड गर्नुहोस्
तपाईंको अवस्थित कागजातहरू, स्प्रेडशिटहरू र प्रस्तुतीकरणहरू आयात गर्नुहोस् वा स्क्र्याचबाट नयाँहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
जहाँबाट पनि पहुँच र सम्पादन गर्नुहोस्
तपाईंलाई केवल एक वेब ब्राउजर चाहिन्छ। तपाईंको कागजातहरू, स्प्रेडशिटहरू र प्रस्तुतीकरणहरू सुरक्षित अनलाइन भण्डारण गरिएका छन्।
वास्तविक समयमा परिवर्तन साझा गर्नुहोस्
तपाइँको कागजातमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् एकै समयमा परिवर्तनहरू सँगै बनाउनको लागि।
तपाईले केहि पनि तिर्नु पर्दैन।
कागजातहरू, स्प्रेडशिटहरू र प्रस्तुतीकरणहरू अनलाइन सिर्जना गर्नुहोस्
स्क्र्याचबाट आधारभूत कागजातहरू सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं सजिलैसँग सबै आधारभूत कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै बुलेटेड सूचीहरू सिर्जना गर्ने, स्तम्भहरू द्वारा क्रमबद्ध गर्ने, तालिकाहरू, छविहरू, टिप्पणीहरू वा सूत्रहरू थप्न, र फन्ट परिवर्तन गर्ने, अन्य थुप्रै चीजहरूमा। र यो सित्तैं हो।
अपलोड फाइलहरू पहिले नै सिर्जना गरीएको छ
गुगल कागजातहरू प्राय जसो फाईल फाइलहरू स्वीकार गर्दछ जस्तै DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, इत्यादि। त्यसकारण, तपाईंसँग पहिले नै भएका फाइलहरू अपलोड गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
परिचित डेस्कटप लुकले ब्रीज सम्पादन गर्दछ
केवल बोल्ड, अन्डरलाईन, ईन्डेन्ट, फन्ट वा नम्बर ढाँचा परिवर्तन गर्न, सेलहरूको पृष्ठभूमि र change परिवर्तन गर्न, र अधिकमा उपकरणपट्टीमा बटन क्लिक गर्नुहोस्।
वास्तविक समयमा साझेदारी र सहकार्य गर्नुहोस्
तपाईको कागजात को उपयोग गर्न सक्दछ छनौट गर्नुहोस्
साधारणतया प्रयोगकर्ताहरूको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् जससँग तपाईं विशेष कागजात साझेदारी गर्न र तिनीहरूलाई आमन्त्रण पठाउन चाहनुहुन्छ।
तुरून्त साझेदारी गर्नुहोस्
कुनै पनि प्रयोगकर्ताले तपाईंले आफ्नो कागजात सम्पादन गर्न वा हेर्नको लागि आमन्त्रित गर्नुभयो, स्प्रेडशिट, वा प्रस्तुतीकरण उनीहरूले लग इन हुने बित्तिकै यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ।
वास्तविक समयमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्पादन र प्रस्तुत गर्नुहोस्
बहु प्रयोगकर्ताहरूले कागजातहरू हेर्न र एकै समयमा परिवर्तन गर्न सक्दछन्। अन-स्क्रिन च्याट विन्डो स्प्रिेडसिटको लागि समावेश गरिएको छ, र कागजात समीक्षाको साथ, तपाईं वास्तवमै कसले र कहिले परिवर्तन गरेको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग प्रस्तुतीकरण अवलोकन गर्नु धेरै सजिलो छ किनकि कुनै पनि प्रयोगकर्ता जसले प्रस्तुतीकरणमा सामेल भएको छ उसले स्वचालित रूपमा प्रस्तुतकर्तालाई पछ्याउन सक्छ।
तपाईको काम सुरक्षित रुपमा संगठित गर्नुहोस्
जहाँसुकैबाट सम्पादन र पहुँच गर्नुहोस्।
तपाईंले केहि पनि डाउनलोड गर्नु पर्दैन। तपाईं आफ्नो कागजातहरू, स्प्रेडशिटहरू र कुनै पनि कम्प्युटरबाट प्रस्तुतीकरणहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन ईन्टरनेट जडान र मानक ब्राउजर हो। र यो सित्तैं हो।
तपाईको काम सुरक्षित रूपमा भण्डार गर्नुहोस्
अनलाइन भण्डारण र स्वत: बचत संग, तपाईं अब एक स्थानीय हार्ड ड्राइव विफलता वा एक बिजली आउटेज डर छैन।
प्रतिलिपिहरू सजिलैसँग बचत र निर्यात गर्नुहोस्
तपाईं कागजातहरू र स्प्रिडशिटहरू तपाईंको आफ्नै कम्प्युटरमा DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF वा HTML ढाँचामा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको कागजातहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्
तपाईंको कागजातहरू सजिलैसँग फोल्डरहरूमा व्यवस्थित गरेर फेला पार्नुहोस्। कागजातलाई जति मनपर्दो फोल्डरहरूमा ड्र्याग र ड्रप गर्नुहोस्।
तपाईंको कागजातहरू कसले हेर्न सक्छन् नियन्त्रण गर्नुहोस्
तपाइँको काम वेब पृष्ठको रूपमा प्रकाशित गर्नुहोस्
तपाईले आफ्नो कागजातहरू अनलाइन प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ, सामान्य देखिने वेब पृष्ठहरूको रूपमा, केहि नयाँ सिक्न बिना।
तपाईंको पृष्ठहरू कसले देख्न सक्छ नियन्त्रण गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो काम प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ जुन यो सबैको लागि उपलब्ध छ, केवल केही व्यक्ति वा कोही पनि होइन ... यो तपाईंमा निर्भर छ। तपाईं कुनै पनि समयमा अप्रकाशित पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको ब्लगमा तपाईंको कागजात प्रकाशित गर्नुहोस्
जब तपाईं कागजात सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई आफ्नो ब्लगमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको कम्पनी वा समूहमा पोष्ट गर्नुहोस्
गुगल अनुप्रयोगहरूको साथ तपाईको कम्पनी वा समूहमा महत्वपूर्ण कागजातहरू, स्प्रेडशिटहरू, र प्रस्तुतीकरणहरू साझेदारी गर्न अझ सजिलो छ।
तपाईको पहिलो गुगल कागजात सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ?
तपाईंले भर्खर आफ्नो गुगल खातामा पहुँच गर्नुपर्नेछ।
अर्को, कागजातको प्रकार छान्नुहोस् तपाईले अवस्थित फाईल सिर्जना गर्न वा अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ।
यसलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस् र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो प्रकाशित गर्नुहोस्।
पढ्नुहोस्: नि: शुल्क आधिकारिक लिंक पोष्ट गर्नुहोस्: Google कागजात
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » गुगल - सिर्जना र तपाईंको काम अनलाइन साझा
जिम्प - नि: शुल्क डिजाइन
BLENDER मा थ्रीडी मोडेलहरू